Nhau - yakakwira tembiricha bhora vharafu
Nzira yekusarudza vharuvhu zvinhu pasi pekupisa kwakanyanya mamiriro
Mune inoyerera irikuendesa system, vharafu chinhu chakakosha kudzora chinhu, icho chinonyanya kuve nemabasa ekugadzirisa, kusiyanisa, anti-backflow, kudimburwa, uye shunt. Iyo vharuvhu inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri uye ehurumende minda. Yakakwira tembiricha vharafu imhando inowanzo shandiswa mumagetsi. Yayo chaiyo zvivakwa ndeinotevera: yakanaka kudzima mashandiro, kudzika kwakadzika kunogona kuitwa; kugona kwakanaka; kugona kwakanaka kwekukanganisa, zvakaoma kukuvadza nemhirizhonga; Hana brittleness inowanzo kuve shoma uye zvichingodaro. Iko kune akati wandei marudzi eepamusoro-tembiricha mavhavha. Izvo zvinowanzoitika ndeye yakanyanya-tembirichashavishavi mavharuvhu, kupisa kwepamusoro mavharuvhu ebhora, mafirita ane tembiricha yepamusoro, uye tembiricha yakakwira mavhavha egedhi.
Yakakwira-tembiricha mavhavha anosanganisira epamusoro-tembiricha magedhi mavharuvhu, akanyanya-tembiricha kuvhara-kure mavharuvhu, epamusoro-tembiricha cheki mavharuvhu, epamusoro-tembiricha mabhora mavharuvhu, akanyanya-tembiricha shavishavi mavharuvhu, akanyanya-tembiricha tsono mavharuvhu, akanyanya-kupisa tembiricha. yakakwira-tembiricha kumanikidza kudzikisira mavharuvhu. Pakati pavo, anonyanya kushandiswa mavhavha egedhi, mavhavha epasi, mavhavha ekuongorora, mavharuvhu ebhora uye mavharuvhu
Kupisa kwekushanda mamiriro ezvinhu anonyanya kusanganisira sub-yakanyanya tembiricha, yakanyanya tembiricha Ⅰ, yakanyanya tembiricha Ⅱ, yakanyanya tembiricha Ⅲ, yakanyanya tembiricha Ⅳ, uye yakanyanya tembiricha Ⅴ, inozounzwa zvakasiyana pazasi.
1. Sub-yakanyanya tembiricha
Sub-yakakwira tembiricha zvinoreva kuti tembiricha inoshanda yevhavha iri munzvimbo ye325 ～425 ℃. Kana iyo svikiro iri mvura uye chiutsi, WCB, WCC, A105, WC6 uye WC9 dzinonyanya kushandiswa. Kana iyo svikiro iri ine sarufa-ine mafuta, C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M, nezvimwewo, izvo zvinopesana nesoridi sulfide, zvinonyanya kushandiswa. Ivo anonyanya kushandiswa mumhepo uye kumanikidza kudzikisira zvishandiso uye kunonoka coking zvishandiso munzvimbo dzekuchenesa. Panguva ino, mavhavha akagadzirwa neCF8, CF8M, CF3 uye CF3M haashandisirwe kurwisa kurwisa kweasidhi mhinduro, asi anoshandiswa kune zvigadzirwa zvesarufa-zvine mafuta nemafuta uye gasi mapaipi. Mune mamiriro aya, iyo yakanyanya kushanda tembiricha yeCF8, CF8M, CF3 uye CF3M iri 450 ° C.
2. Kupisa kwazvo Ⅰ
Kana iyo tembiricha inoshanda yevhavha iri 425 ～550 ℃, iri yepamusoro-tembiricha kirasi I (inonzi PI kirasi). Chinhu chikuru chePI giredhi vharafu ndeye "yakakwira tembiricha Ⅰ giredhi yepakati kabhoni chromium nickel isingawanzo pasi titanium yemhando yepamusoro kupisa isingadziviriri simbi" neCF8 seyakakosha chimiro muASMA51 standard. Nekuti iyo PI giredhi izita rakakosha, iyo pfungwa yeinopisa-tembiricha simbi isina tsvina (P) inosanganisirwa pano. Naizvozvo, kana svikiro rinoshanda riri mvura kana chiutsi, kunyange hazvo tembiricha yakakwira-simbi WC6 (t≤540 ℃) kana WC9 (t≤570 ℃) inogona kushandiswa, nepo sarufa-iine zvigadzirwa zvemafuta zvinogona zvakare kushandiswa simbi ine tembiricha yepamusoro C5 (ZG1Cr5Mo), asi Ivo havagone kunzi PI-kirasi pano.
3. Kupisa kwepamusoro II
Tembiricha yekushanda yevhavha ndeye 550 ～650 ℃, uye inorondedzerwa senge tembiricha yakakwira Ⅱ (inonzi P Ⅱ). PⅡ kirasi yakakwira tembiricha vharuvhu inowanzo shandiswa mumafuta anorema anokamura chipenga chigadziriso chemafuta. Iyo ine yakakwira tembiricha lining yekupfeka-inodzivirira gedhi vharafu inoshandiswa mune matatu-kutenderera kamwene uye zvimwe zvikamu. Iyo huru yekushandisa PⅡ giredhi vharafu ndeye "yakakwira tembiricha Ⅱ giredhi yepakati kabhoni chromium nickel isingawanzo pasi titanium tantalum yakasimbisa kupisa-nemishonga simbi" neCF8 seyakakosha chimiro mune ASTMA351 standard.
4. Kupisa kwepamusoro III
Tembiricha yekushanda yevhavha ndeye 650 ～730 ℃, uye yakarongedzwa seyakanyanya tembiricha III (inonzi PⅢ). PⅢ kirasi yakakwira tembiricha mavhavha anonyanya kushandiswa mune hombe inorema mafuta anobatsira ekupaza zvikamu muzvinonatsiridza. Chinhu chikuru cheiyo PⅢ kirasi yakakwira tembiricha vharuvhu ndiyo CF8M yakavakirwa paASPMA351.
5.High tembiricha Ⅳ
Iro tembiricha rinoshanda revhavha i730 ～816 ℃, uye inonzi yakanyanya kupisa tembiricha IV (inonzi PIV ipfupi). Iyo yepamusoro muganho weanoshanda tembiricha yePIV vharuvhu iri 816 ℃, nekuti yakanyanya tembiricha inopihwa neyakajairwa ASMEB16134 yekumanikidza-tembiricha giredhi yakasarudzika yevhavha dhizaini i816 ℃ (1500υ). Uye zvakare, mushure mekunge tembiricha yekushanda yapfuura 816 ° C, simbi iri padhuze nekupinda munzvimbo yekushisa tembiricha. Panguva ino, simbi iri mupurasitiki deformation zone, uye simbi ine ipurasitiki yakanaka, uye zvinonetsa kumira yakanyanya kushanda kumanikidza uye kukanganisa simba uye kuichengeta kubva mukukuvara. Iyo huru zvinhu zveP Ⅳ vharuvhu ndeyeCF8M mune iyo ASTMA351 chiyero seyakakosha chimiro "yakanyanya tembiricha, svutugadzike kabhoni chromium nickel molybdenum isingawanzo pasi titanium tantalum yakasimbisa kupisa-kupisa simbi". CK-20 uye ASTMA182 yakajairwa F310 (inosanganisira C zvemukati ≥01050%) uye F310H inopisa simbi isina simbi.
6, kupisa kwakanyanya Ⅴ
Iko tembiricha inoshanda yevhavha iri pamusoro pe816 ℃, inonzi PⅤ, PⅤ yakakwira tembiricha vharuvhu (yekuvhara-kure mavharuvhu, isiri kudzora mavharuvhu epepuru) inofanirwa kutora nzira dzakasarudzika dzekugadzira, dzakadai sekumhara kuputira lining kana mvura kana gasi. chengetedza kushanda kwese kwevhavha. Naizvozvo, iyo yepamusoro muganho weanoshanda tembiricha yePⅤ kirasi yakakwira tembiricha vharuvhu haina kutaurwa, nekuti iko kushanda tembiricha yeanodzora vharuvhu haina kungogadziriswa nezvakanyorwa chete, asi neakasarudzika dhizaini nzira, uye yakakosha musimboti we dhizaini nzira zvakafanana. PⅤ giredhi yakakwira tembiricha vharafu inogona kusarudza zvine musoro zvinhu zvinogona kusangana nevhavha zvinoenderana neyayo inoshanda svikiro uye kushanda kumanikidza uye yakakosha dhizaini nzira. MuPⅤ kirasi yakakwira tembiricha vharuvhu, kazhinji iyo flapper kana butterfly vharafu ye flue flapper vharafu kana shavishavi vharafu inowanzo sarudzwa kubva HK-30 uye HK-40 yakakwira-tembiricha maalloys mune ASTMA297 standard. Ngura inodzivirira, asi isingakwanise kumira nekuvhunduka uye yakanyanya kumanikidza mitoro.